China Nitrogen Protection Jet Mill System N'ihi Pụrụ Iche Ihe ụlọ ọrụ na-emepụta | Qiangdi
Ngwongwo igwe jet na-echekwa nitrogen -Ọ bụ sistemụ nitrogen dị ka mgbasa ozi, na nrụgide dị mma, na-emecha usoro ndegharị nke ngwaahịa pụrụ iche dịka ọkụ, ihe mgbawa, ngwa ngwa oxidized na ihe ndị hygroscopic .na-eru iche iche ntụ ntụ.
Ngwongwo igwe ugboelu nchebe na-eji nitrogen eme ihe dika mgbasa ozi maka ikuku Ngwuputa iji mezuo mkpochapu usoro. Igwe ugboelu ugboelu karisia mejupụtara compressor, ebe nchekwa ikuku, ebe nchekwa ihe, igwe jet, cyclone separator, mkpoko na akpaka njikwa. Mgbe usoro ọrụ, A ga-ewepụta gas nitrogen na sistemụ iji chụpụ ikuku ruo sistemụ dum rute ọnụọgụ ọnụọgụ nke nchọpụta oxygen. Mgbe usoro ga- na-akpaghị aka na-amalite ihe udia ngwaọrụ nri ihe evenly n'ime igwe igwe nri nke igwe ugboelu. The abịakọrọ nitrogen gas na-agbara ndi mmadu na a nnukwu ọsọ n'ime igwe milling site na nozulu ultrasonic pụrụ iche. Ya mere, ihe ndị ahụ ga-ala site na ngwa ngwa, mmetụta na megharia ugboro ugboro n'etiti ntanye ogwu nke ultrasonic. A ga-achịkọta ihe ndị dị na ala yana nubata n'ime ụlọ grading. Ha enweghị ike ịbanye na wiilụ a na-agbanye na ya wee banyeghachi n'ime ime igwe maka igwe ọka ọzọ. Mkpụrụ ọka ahụ na-adịkarị njọ ga-abanye na wiilị grading wee gbawaa ya na onye na-ekewa ikuku na onye na-achịkọta ebe ikuku nitrogen ga-alaghachi na compressor, site na nke ọ ga - abịakọrọ maka imegharị.
1.Odabara pulverize flammable, ihe mgbawa, mfe oxidized na hygroscopic ihe.
2.Operation of machine na-achịkwa elu ihuenyo mmetụ na PLC maka full-auto akara, Ọ dị mfe ịchịkwa oxygen ọdịnaya.
3.Nitrogen na-emegharị ihe na obere oriri. Njikwa nitrogen dị ọcha dị elu karịa 99%.
4.Dị ka ihe onwunwe onwunwe, ị nwere ike họrọ iji Jet na nkume igwe nri ma ọ bụ àjà ihe ọ ultraụ -ụ-ezi n'ibu pulverizer.
5.Ọ na-ọtụtụ-eji sọlfọ, Cobalt, nickel, boron oxide na hygroscopic ntecha na na.
6. Usoro nchịkwa na-ebuwanye ibu, oke nkenke, nhọrọ, nkwụsi ike ngwaahịa dị elu.
Bọmbụ gbawara agbawa na-egosi imewe maka nitrogen mgbasa usoro iji mezuo ihe ọ processingụ -ụ na-egweri ngwa ngwa nke ihe na-agba ọkụ na ihe mgbawa.
Chart Chart Of Nitrogen Pulverization Sistemụ
The eruba eserese bụ ọkọlọtọ egwe ọka nhazi ， na nwere ike gbanwee maka customers.There nwere akụkụ atọ maka dum usoro: Nitrogen n'ichepụta usoro, Nitrogen mkpakọ usoro, nchọ egweri usoro.
Ngwa ngwa dị iche iche ubi
Ejiri ya na ọgwụ (onye ahịa China)
Ejiri na sọlfọ
DBF-400 Na pasting Ceramics na Pu .n'ihi na nke elu ekweghị ekwe na-eji maka ụlọ ọrụ batrị, Ọzọkwa, ọ bụ a hygroscopic ihe onwunwe, Ya mere, anyị na-eji NPS egweri ihe a.
Hongkong chemicle factory, Poly-Si powder egweri maka batrị, Otu set nke DBF-400 nitrogen nchedo Jet na nkume igwe nri mmepụta edoghi, Production ikike 200kg / h, urughuru size D90: 15μm
◆ Ngwaahịa anyị nwere ezigbo ahịa na China niile,
Ihe obula na ogwu ogwu, ihe omuma, ihe ohuru, batrị & elektrọn, mkpuchi & pigments ụlọ ọrụ.
◆ Anyị na-ebupụ ngwaahịa anyị na ụwa niile: America, Australia, Africa na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na Mba Ndịda Ọwụwa Anyanwụ, dị ka Pakistan, Korea, Vietnam, India, Burma, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Singapore, Japan, Thailand, Egypt, Ukraine, Russia , wdg. Karịsịa na Ubi Ugbo.
Nke gara aga: Battery Industry na ndị ọzọ Chemical Ihe Jiri Fluidized-bed Jet Mill
Osote: Jet Micron Grader Maka Nhazi